Ilanivato-Anosipatrana Halatra finday niafara tamin’ny tsindron’antsy
Olan` ny JIRAMA tany Antalaha Tonga namono afo ny praiministra
Manoloana ny savorovoro ny korontana nisy alarobia 20 Martsa 2019 tao Antalaha, izay nateraky ny olana mifandraika amin’ny fahatapahan’ny herinaratra matetika ka namoizana ain’olona sy naharatràna olona, dia nidina tany an-toerana ny Praiminisitra Ntsay Christian,
Air Seychelles Hanao andrana telo volana eto Madagasikara indray
Hiverina hitatitra ireo mpandeha hiazo ny Nosy rahavavy Seychelles miainga eto Antananarivo indray manomboka amin’ny 03 jolay ho avy izao ny Air Seychelles.
Fitomboan’ny tsy fandriampahalemana Mahatsara ny tsenan’ny « caméra de surveillance »
Tsara ny tsena ! Io no filazan’ireo mpivarotra «caméra de surveillance» izay tojo ny mpanao gazetinay teto an-drenivohitra.
JIRAMA Antalaha Nodoran’ny olona leon’ny delestazy
Nodoran’ny olona ny Biraon’ny Jirama ao Antalaha omaly noho ny tsy fahafalian’ireo mpanjifa noho ny delestazy mampikolay azy, ka hotohoton’ny afo tanteraka.
Fanavakavaham-bolon-koditra Mbola tena manjaka eny anivon’ny fiaraha-monina
Mbola hita sy manjaka eny anivon’ny fiaraha-monina Malagasy ny fanavakavaham-bolon-koditra ka tsy vitsy ireo mitondra takaitra vokatr’izany.
Noho ny toaka. Efa tsy tompon’ny tenany ka tsy afaka nandinika fa domelin’ny zava-pisotro mahamamo nandritra ny ora roa ny sain’ny tovolahy iray ka nanindrona antsy ny namany izay nitoroka azy ho nangalatra finday.
Niara-nisotro toaka ny alahady teo izy telo lahy mpinamana, sahabo tamin’ny 11 ora, teny Ilanivato Anosipatrana. Efa nanomboka tamin’ny 9 ora izy ireo no niara-nisotro, afaka ora roa, tapakevitra fa hiova tranom-barotra zava-pisotro indray ihazo an’Anosipatrana. Teny an-dalana, tsikaritry ny iray fa very ny telefaonany ka tany amin’ilay iray 28 taona no velon’ahiahy ireo roalahy. Tezitra ilay voapanga ka lasa nody. Arak any fampitam-baovaon’ny Polisim-pirenena. Nitondra antsy izy avy any ary tsy nisy fanazavana fa tonga dia nanindrona tamin’io zava-maranitra io tsy nisy fiambahambana teo amin’ny ila tratra an-kavia izay misy ny fon’ilay very finday. Rehefa avy eo, nokapainy tamin’io antsy io teo amin’ny lohany ihany koa ilay namany. Tsy sahy niditra nanasaraka ny nanatri-maso noho ny hery tsy mitovy sy ny tsy fahatongavan-tsaina miampy haromontan’ilay nitana zava-maranitra ka nampiantso ny mpitandro filaminana avy hatrany. Tonga ara-potoana ny polisin’Ilanivato ka tsy afa-nitsoaka fa voasambotra avy hatrany ilay nahavanon-doza, natolotra ny fampanoavana ary naiditra am-ponja vonjimaika. Ny naratra kosa noentina eny amin’ny hopitaly. Mirohotra izay tsy izy ny fandratrana iniana atao sy ny vono olona tato ato noho ny fidorohana zava-mahadomelina. Tsy misy hasiny amin’ireo doroky ny toaka sy ny rongony intsony ny aina. Mahazo vahana hatrany ny fandatsahan-drà.